मात्रै १२ लाखमा अब यसरी बनाउनुस् तपाईले खोजे जस्तै घर – MTV NEPAL
मात्रै १२ लाखमा अब यसरी बनाउनुस् तपाईले खोजे जस्तै घर
in आर्थिक August 15, 2016	0 4,460 Views
बि.सं. २०७२ सालको बैशाखमा गएको महाभुकम्पमा ६ लाख भन्दा बढी घरहरु भत्किए । घर भत्कदा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो । त्यस घटनापछि धेरैले घर बनाउँदा सावधानी अपनाउन थालेका पनि छन् । भुकम्प प्रविधि घर निर्माणमा धेरैको चासो पनि बढ्दै गएको छ । बजारमा अहिले भुकम्प प्रतिरोधि घरको अवधारणा पनि आइरहेको छ । यस क्रममा घर निर्माणको लागि इको प्यानल, प्रिफ्याब मात्र नभएर सिमेन्ट स्याण्डविच प्यानल पनि बजारमा उपलब्ध हुन थालेका छन् ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘सुरक्षित घर मेला २०७३’ शुरु भएको छ । साउन ३१ बाट शुरु दोस्रो संस्करणको यो प्रदर्शनी भदौ २ गतेसम्म चल्नेछ । भृकुटिमण्डपमा चलिरहेको प्रदर्शनीमा अहिले सिमेन्ट स्याण्डविच प्यानलको प्रयोग गरेर बनेका नमुना घर पनि राखिएका छन् ।
यी घर निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीहरुको छनौटको आधारमा मूल्यमा फरकपन आउने भएतापनि समान्यतया ४ कोठे ८ सय स्वायर फिटको घर १२ देखी १४ लाखमा निर्माण गर्न सकिन्छ । यी घरमा आवश्यकता भएमा एक तल्लासम्म थप्न सकिन्छ । यस्तो घर निर्माण गर्दा अग्नी प्रतिरोधात्मक र तापक्रमको मेन्टनको लागी घरको वालकोबीचमा विभिन्न फाइबरहरु पनि राखिन्छ ।
स्क्वायर फिटको आधारमा यस्तो घरहरुको मूल्य निर्धारण हुन्छ । आफुले घरमा प्रयोग गर्ने सामानहरु अनुसार मूल्यमा अन्तर आउने गर्छ । चलनचल्ति अनुसार प्रतिस्क्वायर फिटको मूल्य १२ देखि २५ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तो प्रकारका घरहरुको मूख्य विशेषता भनेको यी घर एक ठाउँमा जडान गरिएको छ भनेपनि पुनः अर्को ठाउँमा लगेर फिटिङ गर्न सकिन्छ । ग्राहकको आवश्यकता अनुसार घरको साइजको निर्माण गर्न सकिन्छ । घर मात्रै नभएर स्कूल, स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल लगायतको भवन पनि यही विधिबाट निर्माण गर्न सकिन्छ ।
हाल भुकम्पबाट प्रभावित विभिन्न जिल्लाहरुमा यस्तो प्रकारको घरहरु निर्माण भइरहेका छन् । शहरमा पक्कि घर भएका र आफ्नो कम्पाउन्डमा पर्याप्त ठाउँ हुनेहरुले पनि ‘व्याकअप घर’ को रुपमा यस्तो घर बनाइरहेका छन् । साथै नयाँ घर बनाउनेहरुले पनि यस्तो घरलाई आफ्नो रोजाइमा राखेका छन् ।
घरको पिलर :
सामान्यतया यस्तो प्रकारको घरमा आवश्यकता अनुसार फलामको पिलर प्रयोग गरिन्छ । घरको साइज तथा तल्लाको आकारले पिलरको सङ्ख्या निर्धारण गर्छ । पिलरवाला घरमा जस्तै यस्तो प्रकारको घरमा पनि बिम एक आपसमा कसिन्छ जसले घरलाई बजबुत बनाउँछ ।
घरको पार्टेसन :
घरको पार्टेसन अर्थात हामीले भन्ने गरेको वालको रुपमा एकप्रकारको सिमेन्ट तथा अन्य केमीकलहरुको मिश्रणबाट बनेको हल्का खालको सिमेन्ट स्याण्डविच प्यानलको प्रयोग हुने गर्छ । जसले तापक्रमलाई मेन्टेन गरेर राख्छ । पार्टेसनमा दुइवटा ५० देखी १०० मिलिमिटरको लेयर प्रयोग गर्न सकिन्छ र बीचको ग्याप भर्नको लागि वरपर पाइने विभिन्न वस्तुहरु बोत्तल, प्लाष्टिक, अनावश्यक पुस्तक, कपडा आदीको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
झ्यालढोका : यस्तो प्रकारको घरमा झ्यालढोका पनि फरक फरक डिजाइनको प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तो काठ, मेटल, सिसा त्यसमा पनि भेराइटिजहरु रहेका छन् ।
घरको छाना :
घरको छाना स्टोन कोटेड हुन्छ जसले तापक्रम नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । साथै पानी परको समयमा आउने आवाजलाई पनि नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । घरको छानाको डिजाइनहरु पनि ग्राहकको रोजाइमा भरपर्छ । यसले पनि घरको मूल्यमा प्रभाव पार्छ ।
यस्ता घरका विशेषताहरुः
निर्माण गर्न सहज
बलियो तथा टिकाउ
कम चौडाइको पार्टेसन
अग्नी तथा पानी प्रतिरोधात्मक
घरको आकार बढाउन घटाउन सहज
घर निर्माणमा आफुले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरुले घरको मूल्य निर्धारण हुन्छ । साथै प्रयोग गर्ने सामग्रीहरुले घरको आयुको पनि निर्धारण गर्छ । सस्तो मूल्यमा तयार गरिएको घरको आयु ३५ वर्ष हुन्छ भने गुणस्तरिय सामानहरुको प्रयोग गरिएको खण्डमा घर ७० वर्षसम्म टिक्छ ।
कहाँ सम्पर्क गर्ने :
यस्ता घरहरु बनाउने कम्पनीहरुको सङ्ख्या झण्डै दर्जनको हाराहारीमा रहेका छन् । ति मध्येका केही कम्पनीहरुमा क्षमादेवी बिल्डिङ्ग प्रा.लि. कौशलटार भक्तपुर, हिमालयन प्रि फ्याव प्रा.ली, भगवतीबहाल, ठमेल काठमाडौं, निर्माण संसार प्रा.लि. सुकेधारा काठमाडौं आदी रहेका छन् ।
Previous: Complaints of migrant workers on the rise
Next: Govt to distribute 117,000 biometric IDs